teny amin’ny tsangambato Ralaimomongo Analakely omaly. Efa nanambara moa ny mpitandro ny filaminana fa tsy azo atao io hetsika noho ny tsy fahazoana alalana, indrindra noho ny fisian’ny frankofonia. Efa nisy rahateo ny resaka nivoaka fa hosamborina ireo mpitarika. Anton’ny hetsika ny fanoherana ny politikan'ny fitondrana izay manome vahana ireo vahiny hangoron-karena sy maka ny tanin'ny Malagasy, ka zary lasa tompony mangataka atiny saingy izao nitsefotra izao indray. Efa maro ny hetsika tsy nahomby toy izao, izay mampametra-panontaniana ihany hoe ny mpitarika ve no tsy maharesy lahatra vahoaka sa ny olona mihitsy no efa tsy liana intsony ? Tokony handini-tena ihany na ny vahoaka na ireo mpitarika hetsika politika. Matoa ny olona tsy mamaly ny antso dia misy zavatra tsy maharesy lahatra azy ataon’ny mpanao politika. Maro rahateo ireo efa hita foana ary niarahan’ny maro nahita ny nafitsony ka aleon’ny vahoaka mipetraka sy manaja tena. Tsy takona afenina ihany koa anefa ny olana mahazo ny firenena ka raha hitazam-potsiny sy himenomenona eny anivon’ny fiarahamonina dia tsy hisy na inona na inona hiova eto. Hanohy ny tsy nety nataony ihany ny mpitondra satria tsy misy hery hanery azy hanitsy ny diany. Ny fahanginan’ny vahoaka dia midika fa fankatoavana ny tsy mety.